उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव : कसको प्यानलमा को « Aarthik Sanjal उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव : कसको प्यानलमा को – Aarthik Sanjal
उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव : कसको प्यानलमा को
१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०९:४७
काठमाडौ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ चुनावमा होमिएको छ । महासंघले ५४औं वार्षिक साधारणसभा आगामी चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा गर्ने तय गरिसकेको छ । साधारणसभाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति सदस्य निर्वाचित गर्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारीमा उठ्ने तयारी गरेका उद्योगी व्यवसायी देश दौडाहा सकाएर आफ्नो प्यानल बनाउन लागि परेका छन् ।
प्रधानले यस अघिको निर्वाचनमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनलाई शेखर गोल्छाले पराजित गरेका थिए । ढकाल वर्तमान कार्यसमितिमा एसोसिएटतर्फबाट निर्विरोध चयन भएका हुन् ।
प्रधानको प्यानलबाट को ?
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका प्रधानले औपचारिक रूपमा आफ्नो प्यानल घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर प्यानल बनिसकेको उनले बताए । उनको प्यालनबाट वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा अन्जन श्रेष्ठ, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति र जिल्ला तथा नगर तर्फको उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिने तयारी छ ।
ढकालको प्यानलबाट को ?
औपचारिक उम्मेदवारी बुधबार घोषणा गर्न लागेका ढलालको प्यालनबाट पनि उपाध्यक्षमा उम्मेवारी दिने व्यक्ति पक्का भइसकेका छन् । ढकालको प्यालनबाट वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा उमेशलाल प्रधान, जिल्ला तथा नगर तर्फको उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारीले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् ।
एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष भने हालसम्म तय भइसकेको छैन । ढकालको प्यानलबाट एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा चुनाव लड्न धेरै कार्यसमिति सदस्य इच्छुक हुँदा तय भइसकेको छैन । ढकालको प्यालनबाट एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा साहिल अग्रवाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, अखिल चापागाईंले इच्छा देखाएको एक व्यवसायीले बताए ।
यता, एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति निर्विरोध बन्ने प्रयासमा लागेका छन् । ज्योतिलाई प्रधान र ढकाल दुवैले आफ्नो टिममा राखेको एक व्यवसायीले बताए ।
महासंघमा ढकाल र प्रधानको यात्रा
उक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्दा प्रधान विजयी भएका हुन् । ढकाल भने एसोसिएट तर्फबाट सर्वसम्मत उपाध्यक्ष छानिएका हुन् ।
दुवै प्रत्यासीको जित्ने दाबी
वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वारद्वय ढकाल र प्रधानले आ–आफ्नो जित सुनिश्चित भएको बताएका छन् । महासंघलाई बलियो बनाउन र यसको गरिमा कायम राखिराख्न अगाडि बढेको प्रधान र ढकालले बताए ।
ढकालले भने, “लामो समयसम्म कार्यसमिति सदस्य हुँदै उपाध्यक्षमा बसेर काम गर्दै आइरहेको छु । गएको निर्वाचनमा सर्वसम्मत भएको हुँ । महासंघको नेतृत्वमा गएर महासंघको गरिमालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछु ।”